ट्रेन द्वारा इटाली अन्वेषण लागि यात्रा सुझाव | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > ट्रेन द्वारा इटाली अन्वेषण लागि यात्रा सुझाव
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 11/12/2020)
रेल द्वारा इटाली मार्फत यात्रा हो एक अविस्मरणीय अनुभव. इटाली गरेको रेल नेटवर्क इटाली लगभग हरेक प्रमुख शहर जडान, सजिलो बनाउने ठाँउ ठाँउ बाट प्राप्त गर्न. रेल द्वारा वरिपरि यात्रा मात्र एक छिटो र प्रभावकारी इटाली हेर्न तरिका हो तर यो पनि सबैभन्दा प्रदान गर्दछ यसको देहात को शानदार दृश्यहरु. यहाँ केही सरल छन् रेल द्वारा इटाली अन्वेषण लागि यात्रा सुझावहरू, भनेर एक जीवनकालमा को यात्रा ग्यारेन्टी हुनेछ.
इटाली अन्वेषण लागि यात्रा सुझाव – रूपमा प्रारम्भिक सम्भावित रूपमा बुक
को सिट र वाहनो सफा र सहज कुनै कुरा जहाँ तपाईं बस्नु चयन छन्. तथापि, जब आफ्नो टिकट खरिद, प्रयास गर प्रारम्भिक बुक के तपाईं लागि सही छ कि सीट प्राप्त सुनिश्चित गर्न.
एक पोस्ट सेभ ए ट्रेन द्वारा साझा गरियो (@saveatrain)
आफ्नो गन्तव्य आधारमा हामी रेल द्वारा इटाली अन्वेषण लागि विभिन्न यात्रा सुझाव छ, तपाईं आफ्नो आवश्यकताबारे त लाग्छ धेरै घण्टा यात्रा गर्न सकिएन. तपाईं विन्डो द्वारा बस्न खुसी छन्? तपाईं हेर्न रूपमा आराम र बाहिर नरहन केही समय खर्च आश्चर्यजनक दृश्यहरु द्वारा पारित, वा तपाईंले बरु डिब्बामा सिटमा हुनेछ? तपाईं आफ्नो सीट बढी खुला सार्न सक्नुहुन्छ, अझै अझै पनि ठूलो सानो घर Windows देखि विचार कदर.
जहाजमा आफ्नो समय को फाइदा लिन
तपाईं खर्च समय लामो रेल सवारी संगठित गर्न मौका हुन सक्छ, केही निद्रामा मा भेट्टाउने या आफ्नो अर्को गन्तव्य लागि योजना बनाउन.
यो तपाईं साँच्चै बन्द गर्नुहोस् र आफैलाई लागि केही समय बाहिर लाग्न सक्छ कि अक्सर छैन. चाहे तपाईं एक पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईंको इटालियन मा काम वा सिक्न इतिहास र आफ्नो चुनिएको गन्तव्य को साइटहरु, विकल्प तपाईंको हो. यात्रा आनन्द र इटाली गरेको लिन विन्डो बाहिर एउटा आँखा राख्न भूल छैन सुरम्य परिदृश्य.
कोलोन बर्लिन गाडिहरु गर्न
स्थानीय वा अन्य यात्री कुरा
एक सबै भन्दा राम्रो को यो ब्लग पोस्ट सुझाव, रेल द्वारा इटाली अन्वेषण लागि यात्रा सुझावहरू कि वास्तवमा रेल द्वारा यात्रा छ भेट्न एक महान अवसर हो स्थानीय वा जस्तै-दिमाग यात्री. यो तपाईं अरूलाई सिक्न सक्छौं के अचम्मको छ. स्थानीय तपाईं सबै भन्दा राम्रो बताउन सक्नुहुन्छ-लुकेका रत्न भ्रमण गर्न, जबकि अन्य यात्री आफ्नो अनुभव र सिफारिसहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एक मौन तर आकर्षक र देखि मार्फत बस्न सकेन अनुकूल व्यक्ति सम्पूर्ण लागि रेल सवारी, वा तपाईंले एउटा प्रश्न सोधेर द्वारा बरफ तोड्न सक्छ. कुराकानी गर्न खुला हुन, के तपाईं सिक्न वा तपाईं सँगसँगै पूरा हुन सक्छ जसले सक्छ के थाहा कहिल्यै.
लिपजिग डर्टमन्ड गाडिहरु गर्न
श्टुटगार्ट गाडिहरु गर्न डर्टमन्ड
रेल शिष्टाचार पालना – रेल द्वारा इटाली अन्वेषण लागि यात्रा सुझावहरू
रेल द्वारा इटाली वरिपरि यात्रा एउटा अचम्मको अनुभव छ. यो निश्चित सबैलाई एक छ बनाउन रेल अन्य यात्रु को आदर हुन महत्त्वपूर्ण छ सुखद यात्रा. कर्मचारी सधैं अतिथि पछि देख्यो छन् सुनिश्चित र सहज महसुस हुनेछ, तथापि, यो considerately कार्य गर्न रेल मा सबैलाई छ.
रोम गाडिहरु गर्न पम्पी
आफ्नो गाडी मा हल्ला स्तर ध्यान र यो लीन प्रयास. चर्को संगीत प्ले वा तपाईँले भर सीट प्रयोग गरेर footrest सराहना कहिल्यै रूपमा. बेहोरा र अरूको लागि सन्दर्भमा, यो तपाईंको रेल यात्रा र सबैलाई अरू यात्रा कि अझ रमाइलो बनाउन हुनेछ.
तपाईं रेल द्वारा इटाली अनुभव र इटाली अन्वेषण लागि हाम्रो यात्रा सुझावहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? जाऊ त्यहाँ SaveATrain अनलाइन हाम्रा सबै exclusives भाडा जाँच र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-tips-for-exploring-italy-by-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ /nl /गर्न यो वा /डे र अधिक भाषा.
रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह यात्रा traveltips